Purchase Penny Auction Software FAQ | Penny Auction qoraalka showga | Penny Auction Software | Pennyauctionwizards.com
– – Main menu – –Home Software Features Pricing	- - Software Pricing - - Addons - - Services Demo More	- - Macaamiisha - - FAQ - - Khariidadda bogga - - Knowledgebase - - Network Status - - Affiliates - - Announcements - - Client Login - - Shuruudaha & Xaaladaha - - Privacy Themes Blog Xiriirka
Hel Nala soo xiriir
Ma dooneysaa in aad ogaato wax badan oo ku saabsan xalka software xaraashka beesadda? You’ve come to the right place! Riix su'aal kasta si ay u arkaan jawaabta markiiba soo muuqan doonto waxa ka hooseeya. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah fadlan nala siin call a ka 9 AM in 9 PM Pacific Standard Time ee 888 407-0605.
Ma heli karaa in ay helaan aad demo guddi admin u website aad demo?
Haa! Haddii aad jeclaan lahayd in ay helaan demo maamulka fadlan isticmaal foomka xiriir ah oo ku yaalla noo menu kore si aad faahfaahin u helaan codsiga. Caadi ahaan waxa aanu ku siin karaan faahfaahinta helaan saacad ah ama gudahood.
Sidee xal u barbardhigi karaa in kuwa kale la mid ah iibinta software xaraashka beesadda?
Our Penny Auction Software adag ayaa lagu soo koraya software xaraashka beesadda muddo ka badan 5 sano. Our adag taariikhda ka hor Beecin beesadda si rasmi ah jiraye yihiin sidii ay maalintan garan. Maaddaama ay dhab ahaantii tani waa shirkad qiyaastii ilaa bilowgii iyo leedahay faham adag ee sida hab ganacsi oo ka shaqeeya oo xidhiidh heer sare warshadaha affiliate marketing iyo sidoo kale bixiyeyaasha albaab bixinta. Our qaab Auction Penny Software xoog loo isticmaalo oo ay Beecin beesadda ugu weyn ee warshadaha.
Our software waxaa la qorsheeyay in Smarty PHP oo uu leeyahay ay engine template gaar ah. Tani waxay u ogolaaneysaa casriyeysan oo aan saamayn ku theme aad kartoo. Shidda waxay isticmaalaan Ajax ka murugeeysan dib taas oo ah xalka qayliso oo kaliya waqtiga dhabta ah oo bixisa fasalba deggan. Qaar badan oo ka bixiyeyaasha kale software isticmaali Qaababka PHP cake deganayn taas oo implode doonaa marka geeyay.
Hadalkaasu jir aado, in aad hesho waxa aad bixiso. Haddii aad raadinayso in ay iibsadaan ah $300 script xaraashka beesadda aad ka filan karto code deganayn oo sidoo kale ka maqan doonaa badan oo ka mid ah qaababka ugu xaraashka dinaar dinaar bay u baahan yahay in si sax ah ay maamulaan.
Waxaan horey u soo iibsaday kale script qashin ka PHP Penny Auction, Penny Auction Script ama Penny xaraashka jilicsan. Waxaan dhimis aad ka heli karaa?
We are aware of these companies and they’re business practices of promising the world to clients only to drop them on they’re head when it comes to following through with customer support or customization. Haddii aad ku jirto xaalad ay aad u baahan tahay caawin laabteen database macaamiisha aad ka weyn tahay in qalabkaasi aanu leeyihiin qalab kartoo qoraal ah si uu kaaga caawiyo. Intaa waxaa dheer waxaanu kuu soo bandhigi karaa dhimis qaxootiga bixiyo idinku adkayn kartaa iibsiga asalka ahaa ka iibiya kor ku ah.
Ma siisaa adeegyada customization?
Auction Penny Wizards waxay bixisaa adeegyada customization aad website beesadda xaraashka. Waxaan bixinaa horumarinta PHP caadadii, Template & design brand, Photo Shop adeegyada graphic design, Horumarka codsiga Mobile u iPhone Android, Horumarinta Flash ciyaarta, Hayalka san Development oo dheeraad ah inta. Haddii aad qabto fikrad cusub oo aad rabtid inaad keento in ay suuq kooxdeena waxa ay keeni kartaa in nolosha!
Aad software ma leeyahay plugins qaali ah inaan u baahan tahay inaad iibsato waa danbe?
Our software yimaado pre-baakadeeyey ka badan 1000 fursadaha in shirkadaha kale iibiso sida kor-. Waxaan aaminsanahay in software Enterprise beesadda xaraashka yimaaddo kuu dhaansan leh kuwaas muuqaalada dhisay. Waxaan samayn bixiyaan qiimaha dhowr saleysan ah iyadana kaas oo lagu badbaadin doonaa in aad waqti MAARAYNTA website sida our desktop software auto jilliinka aflaamta taasoo jari doonaa waqti ku lug leh socodsiinta aad xaraashka beesadda maalin kasta.
Maxaa luqado sameeyo taageero software aad?
Our Software taageertaa luqadaha soo socda (** Pack Language gadashada loo baahan yahay)
Ma u baahanahay inaan noqdo qofka farsamo si ay u maamulaan aniga ii gaar ah xaraashka beesadda?
Our software waa salaysan CMS iyo waxa ka mid ah Mudanayaasha FREE iyo rakibaadda. Tani waxay ka dhigan tahay inaad hesho website ka jeedin-key dhamaystiran oo aan u baahnayn khibrad ah farsamo si ay u bilaabaan kuu gaar ah website xaraashka beesadda. Our Auction Penny Software yimaado iyadoo dhammaan qalabka aad u baahan tahay si ay u bilaabaan ama u maamuli lahayd site u gaar ah. Isticmaalka noo guddiga maamulka dhamaadka dib aad si fudud ku dari kartaa cusub ama la bedelo content ee hadda jira.
Sidee Fast Baan U Qaadan Karaa My License Kadib Purchase?
Isla markii aad iibsatay ayaa xaqiijiyey nidaamkeena liisanka ayaa la soo saaray iyo software waa diyaar u download. Si kastaba ha ahaatee, dhowr wax saamayn laga yaabaa in ay tani ka mid yihiin bixinta by Echeck (tani ma aha qaab sax ah ee lacag bixinta iyo la diidi doonaa) ama haddii musuqmaasuq ee la ogaado. Waxaan xaqiijin dhammaan amarrada telefoon ka hor liisanka lagu siiyey.
Imisa Code la ilaaliyo Or lo?
Starter iyo Professional baakadaha Our ku jira si buuxda double-lo il code (encryption mudnaanta iyo sirta Ioncube). Taasi si kastaba ha ahaatee ma saamaynayso awood u leh inay xaalkaa aad template (.TPL) files ama faylasha CSS. Template customization weli qaadan kartaa meel la baakadaha, kuwaas oo sida jaantuska engine Smarty ka kala Sooco ka files template ka code asaasi. Haddii aad rabtid in aad leedahay si buuxda code il fadlan dooro baakadaha Enterprise noo maadaama ay tani ka mid ah 99% furan il code. Wixii buuxa code il fadlan nala soo xiriir si binta.
Waa kuwee Shatiyeynta Protection aad u isticmaashid?
Fadlan hubi in aad server ayaa ioncube rakiban. Tani lagu rakibi karo on server WHM ah adigoo isticmaalaya compiler u fududaynay Apache. Fadlan la soco in kooxda rakibi si toos ah rakibtay dhammaan qaybaha loo baahan yahay ay ka mid yihiin Ioncube ka dib markii la iibsaday.
Sidee Goobaha Qaar badan oo aan Orod karaya License?
Waxaad laga yaabaa inay (1) website beesadda xaraashka la liisanka haddii aad soo iibsatay noo Starter , Xirmo liisanka Professional ama Enterprise.
I beddeli karaa Site License?
Haa. Waxaad login karaa in guddi macmiilka aad mar kasta iyo barkinta iney liisanka site aad iyo waxa ruuxa in goobta kale. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan software on domain hore shati in la saaro ka hor firfircooni liisanka labaad.
Waxaan iibsan kartaa Full Source Code?
Waxaan iibi Karaa License?
Your liisanka waa lagaga xisbiga kale oo ay shardi tahay in macluumaadka guddi macmiilka aad loo wareejiyo in la iibiyo. Milkiilayaasha cusub ee liisanka nala soo xiriiri kartaa wixii macluumaad ah ee this in la bedelo. Waxaad u baahan doontaa inaad email noogu soo warqad tixraac oo aan aad email u diri kartaa in ay la caawiyo kala iibsiga. Marka suuqa kala iibsiga waxa uu ka dhacayaa ma waxaa mar kale transfered karaan.
Sidee ayaan dib-Arrinka My License?
Waxaa laga yaabaa inaad gasho si aad u guddi liisanka at http://order.pennyauctionwizards.com/ Marka oggollaan inaad ee isticmaali kartaa qaybta adeegyada aad iyo hoos liisanka laga yaabaa in aad ruuxa liisanka by xulashada tab ku haboon. Tani waxaa laga yaabaa in la sameeyo haddii aad u server ka duwan guurto xisaabtaada martigelin. Kiisaska intooda badan tani waxay si toos ah in la cusboonaysiiyaa doonaa update ku xiga.
Customization & Adeegyada Design
Ma siisaa Customization & Adeegyada Design?
Haa! Kooxdayada design waxay bixisaa qaar ka mid ah adeegyada ugu fiican dukaan photo in ganacsiga. Waxaan bixinaa adeegyo brandingeksperten buuxa sida logos, Tusaaleyaal site, Tusaaleyaal email, Tusaaleyaal biy- iyo adeegyada xayaysiinta cayaaraha kale sida video iyo design ganacsiga.
Imisa ayaad Eedayn ee mawduuca Custom A ama Brand?
Our Monty buuxa kharashka caadiga ah xirmo design $2500 USD. Qiimaha Tani waxay ku kala duwanaan kartaa waqti muruga design iyo is-dhexgalka template.
Ma Waxaad U samaynta Penny Auction Videos & Xayasiiska?
Haa! Waxaan bixinaa dhowr xaraashka beesadda qaabab video. Hababka Caadiga videos lagu hoos ku daawan karaa:
Product (Site) Intro Videos. Videos Kuwan waxaa guud ahaan tusay ee bogagga biy- ama ugu muhiimsan ee aad index page. Its video iibka loogu tala galay sida deg deg ah sida loo bilaabo.
Jeesjeesa News Story Video
Video ku tilmaamay Tusaale
Video ku tilmaamay Tusaale 2
TV ganacsi Ad Spot
TV ganacsi Ad Spot 2
Ma siisaa Custom Voice ayaaba?
Waxaan leenahay ka badan 25 talanti cod la heli karo si kooxda design noo. Waxaan hadda u isticmaal talanti in wax soosaar video, baro ad raadiyaha iyo intros duubo nidaamka telefoonka u jawaabay. Fadlan nala soo xiriir ah oo ku saabsan adeegan in ka badan bartaan.
Oo anigu PSDs u gaar ah My Site Design, Waxaad la shaqayn doontaa Kuwani?
Haa. Kooxdayada la Photoshop kasta shaqeyn karaan qorsheeya aad bixisay waxaa laga yaabaa in ay la kulanto faahfaahinta design ugu yaraan. Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaadkan.
Waxaan Hayso Template A From kale Gade qoraalka showga, Waxaan ugu guuri karaan Users Aniga iyo Template Si aad xal?
Waxaan hadda bixiyaan qoraallada socdaalka ee Auction Penny PHP iyo Beecin Microbids. Software kale xaraashka beesadda la suuq guud ahaan xogta ka soo haajirey karaa kooxda ka heli karaan database iyo in ay sameeyaan qiyaasta.
Ha Waxaad Ma Designs Logo & Kale ee aasaasiga ah Design beddelitaanka?
Our shirkadda ku bixin karaan adeeg design aasaasiga ah qiimo-dhimis. Tan waxaa ka mid loading aad logo by FTP iyo samaynta banner fudud oo isbeddel kale image. Adeeggan waxaa guud ahaan si dhakhso ah loo samayn karaa oo laga dalban karaa maqalka.
Haddii aan Hel Custom mawduuc aan Leedahay doonaa?
Haa! Mawduucyada Custom waa hantida milkiilaha goobta. Waxa lagu weydiin doonaa ogolaanshahaaga si u soo bandhigo website-kayaga. Si kastaba ha ahaatee haddii aad dooratid in aan taas loo ogolaado inaan loo sheegin doonaa jeedo ee design ama abid ka iibin.
Hosting & Sooc Server
Waa maxay nooca Do Hosting u baahanahay in aan Bilaabo?
Our software lagu tilmaamay inay tahay xal software xaraashka shirkad ganacsi beesadda. Xalka software Tani waxay u baahan server heegan ah ama server gaarka loo leeyahay magac socda WHM / Cpanel la OS Centos ah 6 nidaamka qalliinka. Waa in ugu ordo 32 ama 64 hab yara.
Maxaan ugu baahnahay Server heegan ah?
Auctions Penny leeyihiin xaddi booqasho sare. Celceliska xaraashka beesadda user kharash gareeya dhowr saacadood waxey dooneysaa website-ka xaraashka beesadda. Tani taas qadarka visitors waxaad heli doontaa in saacadaha ugu xumaa oo taasi ka dhigan tahay goobta aad u baahan doontaa bandwidth iyo khayraadka server ka badan la wadaago bixiyaha martigalin diyaar u yahay in la siiyo shan dollar ah account ka bisha. Intaa waxaa dheer ujeedooyin ammaanka Auctions Penny u baahan server u gaar ah sidii caadi ahaan ay ka arrinsashada ka badan $25,000 halkii maalin. Si loo farsameeyo kaararka deynta aad u baahan tahay shahaadada SSL ah si loo ilaaliyo waafaqsanaanta PCI. Tani waxay u baahan dadaalka badan IP ah. Jawaabta dhamaystiran su'aashan ay tahay ammaanka, waxqabad iyo bandwidth. Iska kasta xaraashka beesadda script iibiya in aad ballan qaadayaa xal in ordi karaan madal la wadaago. Beecin Penny yihiin ganacsi hawgal khatar ah.
Waa maxay Gunnada Ee Hosting Iyadoo Penny Auction Wizards?
Kooxdayada Auction Penny Server maamushaa xarun server heegan ah in mid ka mid ah Americas xarumaha xogta ugu dhaqsaha badan. Waxaan u hurtay hardware diyaar u ah inay isla geeyo ka dib markii aad ka dalban noo software. Tani waxa ay keenaysaa in ay nalalka jeedo dhakhso ah waqtiyo on your website beesadda xaraashka. Kiraysashada server u gaar ah oo ka tirsan shirkadda kale qaato maalmood in ay gayso iyo shirkadaha qaarkood waxay bixiyaan taageero server ama wax yar mar provisioned.
Intee ayay ku Qaadataa in ay gayso Server A & Dhejiyeen Up?
Caadi ahaan waxaan aad leedahay kartaa ilaa iyo ordaya in ka yar hal saac. Haddii arrin abid soo baxdo kooxdeena taageero server waa la heli karaa 24 saacadood maalintii si loo xaliyo wax kasta oo arrimaha martigelin iyo updates server software bixiyaan iyo ragcaayo si toos ah.
Haddii aan aniga doortay Dhanka kale Host maxay sooc Server Ma u baahnahay?
Your server software xaraashka beesadda waa in dhiseen isticmaalaya tafaasiil socda:
Dual Core Server go'an (Ugu Yar) 4 GB ee RAM Centos 5 (32 ama 64 waxoogaa) WHM / Cpanel
Server Faahfaahin DHUFEYSKA:
Bawdada Core Server 16 GB Raam Centos 5 WHM / Cpanel
Annagu ma taageerno wax darfahoodii martigelin ama nidaamyada kale Operating. Si kastaba ha ahaatee software shubmaan waa in PHP5 kasta oo la MySQL 5 deegaanka aan ku caawin karin la noocaan ah rakiban. Adiga ayay ku jirtaa in aan hubinno in aad server kulmay tafaasiil ka sarreeya.
Waa maxay Taageerada Hosting Ma siisaa?
Kooxdayada server provisioning heer caalami ah bixisa adeegyada maamulka server iyo update xirfad leh kasta bixinta aan server. Waxaan la socon jeer iyo wax qabadka server oo idiinka warrami doonaa wax dhibaato ahi daqiiqo ah ogaanshaha gudahood. Sidoo kale waxaan bixinaa gurmad toos ah iyo adeegyada miisaamid load muhiim kale. Marka aad doorato Auction Penny Wizards sida aad ku martigeliysay bixiyaha aad ka soo galayso la Tier ah 1 xarun xogta ku yaalla Dallas, Texas which is connected directly to the Internet’s Fiber backbone. Tani waxay noo ogolaaneysa in samatabbixin xawaare kala iibsiga xogta la ekaan. Kooxdayada ayaa sidoo kale fahamsan noo software xaraashka beesadda gudaha iyo dibedda iyo istaraatijiyadda degdeg ku howl gala waxaa ku nuuxnuuxsan fahamka this.
Waxaan Hagaaji karaa wakhti kasta?
Adeegyada maamulka server Our aad loo cusboonaysiiyo kartaa wakhti kasta si server weyn oo dhakhso leh ka maqnaa muddo jirin.
Waxaan ka noqon kartaa My Hosting & Haajiraan Dhanka kale Anytime?
Haa. WHM yimaado la software socdaalka ku rakiban.
Software Kharashka & Fee’s
Waa maxay Xidhmada The Best Si Dooro?
Jawaabta su'aashani waxa ay ku xidhan tahay qodobo dhowr ah.
Our Penny Auction Software adag ayaa lagu soo koraya software xaraashka beesadda muddo ka badan 5 sano haatan. Our adag taariikhda ka hor Beecin beesadda si rasmi ah jiraye yihiin sidii ay maalintan garan. Maaddaama ay dhab ahaantii tani waa shirkad qiyaastii ilaa bilowgii iyo leedahay faham adag ee sida hab ganacsi oo ka shaqeeya oo xidhiidh heer sare warshadaha affiliate marketing iyo sidoo kale bixiyeyaasha albaab bixinta. Our qaab Auction Penny Software xoog loo isticmaalo oo ay Beecin beesadda ugu weyn ee warshadaha.
Haa! Annagu ma boostada faahfaahin naga helaan demo guddi admin sabab u badan oo isku day jabsiga. Haddii aad jeclaan lahayd in ay helaan demo maamulka fadlan isticmaal foomka xiriir ah oo ku yaalla noo menu kore si aad faahfaahin u helaan codsiga. Caadi ahaan waxa aanu ku siin karaan faahfaahinta helaan saacad ah ama gudahood.
Our software waxaa la qorsheeyay in Smarty PHP oo uu leeyahay ay engine template gaar ah. Tani waxay u ogolaaneysaa casriyeysan oo aan saamayn ku theme aad kartoo. Shidda waxay isticmaalaan Ajax ka murugeeysan dib taas oo ah xalka qayliso oo kaliya waqtiga dhabta ah oo bixisa kala guurka ah seemless deggan. Qaar badan oo ka bixiyeyaasha kale software isticmaali Qaababka PHP cake deganayn taas oo implode doonaa marka geeyay.
Maxaa looga jeedaa taageero waqti nolosha?
Auction Penny Wizards ku siin doonaa updates in software ee waannu ku Noolaan Adduunyada. Tani kuma jiraan wax customization ama code beddelka in aad website. Waxaan samayn bixiyaan adeegyo customization laakiin tani waxaa la siiyaa adeeg. Marka aad iibsato xirmo Auction Penny Software ka Auction Penny Wizards waxaad heli doontaa xirmo software iyo buugga by iyaduna. Intaa waxaa dheer aan rakibno
Kooxdayada horumarinta software ka kooban yahay horumarinta PHP, horumarinta mobile (Coco (Apple)/android), C # iyo samaynta C iyo Photoshop CSS. Lacag dheeraad ah aan la shaqeeya karaa in Customize theme xaraashka beesadda aad, code ama horumariyaan kasta oo suurto gal ah ku darto on waxaad ku riyoon karaan ilaa. Waagii hore waxaanu soo saarney codsiyada MLM, codsiyada mobile, Codsiyada Facebook, caadadii Flash kulan iyo makiinadaha, codsiyada poker iyo inta kale oo badan.
Haddii aad u baahan tahay customization fadlan nala soo xiriir si aad u hesho xigasho ku saabsan mashruuca. Biilasha kooxda inaga soo saaray heerka guri halkii shaqo.
Ha! Tani waa mid ka mid ah sifooyinka lagu garan karo software aynu kasoo horjeeddo nala tartamaya. Waxaan xiro tan oo muuqaalada geliyey software oo heer ee software aan u iibiso. Our competitors will sell you a cheap script but will nickle and dime you on different plugins and add on’s.
Taageerooyin Our software 127 luqado caalami ah, oo ay ku jiraan luqadaha RTL.
Ha, aqoon Internet aasaasiga ah oo kaliya ayaa loo baahan yahay, waxaan aad u tababari doonaan in la sameeyo inta ka hartay! With Penny Auction Wizards you don’t have to worry about lack of support. Our Penny heegan ah Auction takhasuska leh aad ku socon doonaa, iyada oo aad tallaabo goobta ay tallaabo iyo in la siiyo tababar faahfaahsan video. Iyada oo si walba oo aad sidoo kale heli noo buugga lagu magacaabo Penny Auction Success. Buuga waa talaabo Hage talaabo laga bilaabo adiga kuu gaar ah xaraashka beesadda iyo aad Socon inkastoo habka.
Waa maxay Desk Top Auto Lister Software?
From sano oo waayo aragnimo ah ee labada Beecin beesadda iyo wadidooda baannu lahayn wajahay caqabadaha badan ee dhan baaritaan Auction Penny bilowga wajihi joogta ah maalin walba. Taas darteed waxaanu soo saarney xal xaraashka beesadda dunida dhabta ah.
The software auto jilliinka si fudud u ogolaataa qof inay taxaan maalmo mudan in ay ka buuxaan Beecin la click hal badhanka. Codsiga waddaa in Windows oo badbaadiyay milkiilaha xaraashka kiraynaya qofka u gaar ah si ay u maareeyaan iyo abuuro Beecin maalin kasta.
Penny Auction qoraalka showga | Penny Auction Software | Pennyauctionwizards.com.